We.com.mm - ဆေးကုစရာပိုက်ဆံမရှိတော့တဲ့အတွက် ဆေးရုံတက်နေရင်း တက္ကစီထွက်မောင်းနေရတဲ့အဖိုး
တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ လူ့ဘဝက နည်းနည်းကြမ်းတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုအခက်အခဲနဲ့တွေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ဟာ ပိုမိုမာကျောလာတတ်ကြတယ်။ ခက်တာက ဘဝနေဝင်ချိန်ကိုရောက်နေတဲ့၊ အိုမင်းမစွမ်းတော့တဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကျတော့ အခက်အခဲတွေကို ဘယ်လိုများဖြတ်ကျော်ကြပါလိမ့်မလဲ ?
ထိုင်းနိုင်ငံက အဖိုးအိုတစ်ယောက်ရဲ့ သတင်းလေးက အသည်းမာတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုလူတွေကိုတောင် တော်တော်လေး ထိခိုက်စေတယ်။ အဖိုးက အိုနေပြီ။ သူမစွမ်းတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် တက္ကစီကားလေးမောင်းပြီး သူတတ်နိုင်သလောက်ရုန်းကန်နေတုန်း။
ဒီအကြောင်းကိုတော့ Niramon Shicam ( နီရာမွန် ရှီကမ် ) ဆိုတဲ့ လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူတစ်ယောက်က တင်ထားခဲ့တာပါ။ သူတက္ကစီတားစီးတဲ့အခါ တက္ကစီပိုင်းလော့က အသက်ရှုပိုက်တွေတပ်ထားတာတွေ့တာနဲ့အကျိုးအကြောင်းမေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဖိုးက အဆုတ်ရောဂါခံစားနေရပြီး အသက်ရှုပိုက်ကို အချိန်တိုင်းလိုလိုတပ်ထားရတယ်။ အဲဒီအတွက်ဆေးရုံကို နေ့တိုင်းသွားရသလို ဆေးကုသစရိတ်ကလည်း များလွန်းတာကြောင့် သူ့ဆေးဖိုးကို သူကိုယ်တိုင်ထွက်ရှာရတာဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုကို အပူမပေးချင်တာလည်းပါတာပေါ့။
အဲ့ဒီတော့ Niramon က တော်တော်လေးဂရုဏာဖြစ်မိတယ်။ သူသွားရမယ့်ခရီးက ငါးဘတ် လောက်ပဲကျသင့်ပေမယ့် ဘတ် ၁၀၀ ( မြန်မာငွေ ငါးထောင် ) လောက်အထိ ပေးချင်စိတ်ဖြစ်မိတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ကျသင့်ငွေကို ပေးချေခဲ့ပြီး သူကြုံခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်လေးကို လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ပြန်လည်မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအကြောင်းကို လူတော်တော်များများသိပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ အဖိုး ကိုလှုချင်သူတွေ၊ ကူညီချင်သူတွေပေါ်ထွက်လာတယ်။ ခက်တာက အဖိုးက သူတက်ရတဲ့ဆေးရုံ၊ သူ့နာမည် နဲ့ သူ့နေရပ်လိပ်စာတွေကို တစ်ခုမှမပြောခဲ့ဘူး။ အဲ့ဒီအတွက် အဖိုးရဲ့သတင်းဟာ အခုထိ အစအနပျောက်နေတုန်းပါပဲ။
ဘယ်လိုအရာမျိုးကများ အဖိုးကို အဲ့ဒီလောက်အထိ ကြံ့ခိုင်ဖို့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေပေးခဲ့သလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တော်တော်လေးသိချင်တယ်။ တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း လောကကြီးက ဆန်းသားဗျ။ ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်နဲ့ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ရှာစားနေကြတဲ့သူတွေ ဆင်းရဲနေကြတဲ့အချိန် လက်ကြောမတင်းတဲ့သူခိုးတစ်ချို့ကျ ငွေပုံပေါ် အခန့်သားထိုင်လို့ ....
Credit - Niramon Shicam ( Bangkok )
( We Media would like to thank Niramon Shicam ( Bangkok ) for allowing us to use this article. )
ကိုဗစ်ကာလ နေ့အပူချိန်များ မြင့်တက်လာ
သူငယ်ချင်းနဲ့ကော်ဖီသောက်ထွက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သုသု ( ခေါ် ) မိတ်ကပ်ညီညီမောင် ( စမ်းချောင်း )
" မထိုက်တန်ဘူးထင်ရင် အကယ်ဒမီပြန်သိမ်းသွားပါ " ဆိုပြီး ပွဲကြမ်းလိုက်တဲ့ ခွန်းဆင့်နေခြည်
မိုးကြိုးပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကန့်ဘလူတွင် လူနှစ်ဦးသေဆုံး